Nepali Rajneeti | पैसा बचायर राख्नुस यति ठुलो रकमको आईपीओ निष्काशन मिति तोकियो ! पर्यो भने मालामाल
पैसा बचायर राख्नुस यति ठुलो रकमको आईपीओ निष्काशन मिति तोकियो ! पर्यो भने मालामाल
भाद्र २९, २०७८ मंगलबार ८१ पटक हेरिएको
साहस उर्जा लिमिटेडले यही असोज ६ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ।
कम्पनीले सर्वसाधारणमा ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित मूल्यका ७० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएको हो ।
कम्पनीका अनुसार उक्त शेयर सर्वसाधारणले असोज १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । अधिकतममा १० लाख ५० हजार कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । अार्थिक न्युजबाट साभार गरियको खबर